မိခင်ဖြစ်သူက ကွယ်လွန်တာ မကြာသေး ဒီနေ့မှာပဲ ဖခင်ကိုပါ ထပ်မံ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည် – Cele Zone
မိခင်ဖြစ်သူက ကွယ်လွန်တာ မကြာသေး ဒီနေ့မှာပဲ ဖခင်ကိုပါ ထပ်မံ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
July 22, 2021 - by Yuan
ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အနည်းအကျဉ်းသာလုပ်ဆောင်ပြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုလည်း တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရ။လက်ရှိမှာတော့ ခွန်းဆင့်နေခြည်က နယူးယောက်မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေခြေလှမ်းကျဲနေပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်မေတ္တာကိုတော့ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာ တော့ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းလေးတစ်ခုကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ဒါကတော့ ချစ်ရတဲ့ ဖခင် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ရာ တကယ်ကို ထပ်တူ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲနော် ။ သူ့အနေနဲ့ အဝေးမှာ ဘယ်လောက်တောင် ကြေကွဲ ခံစားရမလည်း ။
ဒီလို ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ” My father passed away at6am Myanmar Standard Time. July22,2021 မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် ၆ နာရီမှာ ကျွန်မဖခင် ဘဝကူးပြောင်းသွားပါပြီ 2021 မှာ အစ်ကိုရယ် အမေရယ် အဖေရယ် ဆက်တိုက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရစိတ်ခံစားချက်ကို ချပြဖို့အင်အားတွေမရှိတော့ပါဘူး လူတိုင်းသောကကိုယ်စီဖြစ်နေကြချိန်မှာကိုယ့်အပူတွေသောကတွေကိုချမပြရက်ပါဘူး လူတိုင်းကိုစာနာပါတယ် လူတိုင်းသောကကင်းပြီးအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ “ရေးသားဖော်ပြထားရာပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Photo – Khunn Sint Nay Chi
မိခင္ျဖစ္သူက ကြယ္လြန္တာ မၾကာေသး ဒီေန႔မွာပဲ ဖခင္ကိုပါ ထပ္မံ ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္
ခြန္းဆင့္ေနျခည္ကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို အနည္းအက်ဥ္းသာလုပ္ေဆာင္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကိုလည္း တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ရ။လက္ရွိမွာေတာ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္က နယူးေယာက္မွာ အေျခခ် ေနထိုင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ခြန္းဆင့္ေနျခည္ကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြေျခလွမ္းက်ဲေနေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ေမတၱာကိုေတာ့ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီေန႔မွာ ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းေလးတစ္ခုကို ေဝမွ်လာပါတယ္ ။ ဒါကေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့ ဖခင္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အေၾကာင္းေလးျဖစ္ရာ တကယ္ကို ထပ္တူ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတာ အမွန္ပါပဲေနာ္ ။ သူ႔အေနနဲ႔ အေဝးမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေၾကကြဲ ခံစားရမလည္း ။
ဒီလို ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ” My father passed away at6am
Myanmar Standard Time. July22,2021 ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မနက္ ၆ နာရီမွာ ကြၽန္မဖခင္ ဘဝကူးေျပာင္းသြားပါၿပီ 2021 မွာ အစ္ကိုရယ္ အေမရယ္ အေဖရယ္ ဆက္တိုက္ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရစိတ္ခံစားခ်က္ကို ခ်ျပဖို႔အင္အားေတြမရွိေတာ့ပါဘူး
လူတိုင္းေသာကကိုယ္စီျဖစ္ေနၾကခ်ိန္မွာကိုယ့္အပူေတြေသာကေတြကိုခ်မျပရက္ပါဘူး လူတိုင္းကိုစာနာပါတယ္ လူတိုင္းေသာကကင္းၿပီးေအးခ်မ္းႏိုင္ၾကပါေစ “ေရးသားေဖာ္ျပထားရာပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။
Previous Article ဒီနေ့မှာ ဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားတဲ့ ခန့်စည်သူရဲ့ ဖခင်ကြီး
Next Article အောက်ဆီဂျင်စက်အတွက် အလှူငွေ (၁၀) သိန်းအပြင် အာဟာရဖြစ်စေမယ့် အစားအစာတွေကို လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး